Maraatooniin Landan 2020: Dorgommiin Qananiisaafi Kipchoogeen taasisan haalaan eegamaa jira - Kichuu
HomeSportsMaraatooniin Landan 2020: Dorgommiin Qananiisaafi Kipchoogeen taasisan haalaan eegamaa jira
Dorgommii maraatoonii Landan Ebla 2020 gaggeeffamuuf jiru irratti Qaqaniisaafi Kipchoogeen waliif bahuuf qophaa’aa jiran qalbii namoota hedduu hawwataa jira.
Qananiisaa Baqqalaa maraatooniidhaan rikoordii kan addunyaa lamaffaa qabatee jira. Atileetiin Keeniyaa Eliwuud Kipchoogeen ammoo rikkoordii addunyaa qabatee jira.
Qananiisaan dorgommii maaraatoonaa Fulbaana darbe Barliinitti taasiseen yoo injifatu, riikardii addunyaa Kiipchoogeen qabatee ture cabsuuf sakandii 2 qofatu isa hafe ture.
Atileetiin umuriin isaa ganna 37 ta’e Qananiisaan, “Eliwuud Kipchoogee waliin dirgommuu nan barbaada. Waggoota darban keessa morkii baayyee taasifneerra,” jedha.
Daayreektarri maaraatoonii Landan Huuf Birashar dorgommii atleetota lamaanii addunyaan daawwachuuf hawwiidhaan eegaa jirra jedhaniiru.
Qananiisaan erga bara 2014 maraatoonii jalqabee kaasee miidhama yeroo gara garaa lkeessa darbeera. Haat’au malee dorgommii maraatoonii Barliin yeroo darbe injifaterratti humni isaa akka deebi’aafii jiru mirkaneeffateera.
“Namni hunduu akka ani atileetii cimaa ta’e beeku. Waggoota 15 fiigicha keessa tureen booda ergan gara maraatoonii dhufee rakkoon miidhamuu na mudateera.
Sababii miidhamaatiifis boodatti hafuu danda’eera. Amma garuu guutummaatti fayyaan koo naaf deebi’eera waan ta’eef waan gaarii nan hojjedha jedheen yaada.”
Dorgommicharratti atleetonni Ityoophiyaa Muussinnat Garramawii fi Mulee Waasihuun ni hirmaatu.
Atileetiin umuriin isaa ganna 35 ta’e Kipchoogeen maraatooniin akka addunyaatti akka qalbii namoota hedduu hawwatu taasiseera. Onkoloolessa darbe magaalaa Veeyinaatti maraatoonii fiiguudhaan saataa lamaan gaditti xumuruudhaan seenaa haaraa galmeesseera.
Kiipchoogeen bara Faranjootaa 2013 eegalee dorgommiiwwan maaraatoonaa 12 irratti hirmaachuun 11 injifateera.
Qananiisaa fi Kiipchoogeen si’a 14 traakiirratti wal dorgomanii, 11n isaanii Qananiisaan injifachuu danda’eera.
Dorgommii daandirraa 4n walarganii, Kiipchoogeen injifachuun isaa ni yaadatama.
Qananiisaan ammoo yeroo umuriin iaa ganna 21 irra jiru fiigicha fageenya 5,000 fi 10, 000 tiin bara 2004 garaa garummaa guyyoota sagalii keessatti rikoordii addunyaa caccabee ture.
Dorgommii Olompikii akka Ateensiifi Beejiing irrattis Qananiisaan warqii argachuudhaan maqaa guddaa qaba.
Maraatoonii ammoo bara 2014 irraa kaasee mo’achuu jalqabe.
“Ammallee hojjechuu nan danda’a. Tasa addaan hin kutu,” jechuun dubbate maraatoonii Barliin sekondii lama qofaaf rikkoordii Kipchoogeen qabamee ture cabsuuf hakaaksee yeroo galetti.
Maraatoonii Kipchoogeen saatii lamaan gaditti Veeyinaarratti galuu danda’es, osoo carraa akkasiifi haala mijataa akkasii argannee kana gochuun ni danda’ama jedhe.
“Namni akka koo haalla kana fakkaatu osoo mijateefii kan Kipchoogeen hojjeteen walqixa ykn isaa ol hojjechuun ni danda’ama. Ani ofitti nan amana,” jedhe Qananiisaan.
Qananiisaafi Kipchoogeen masaanota yeroo dheeraadha. Atileetonni kunneen lamaan marsaa 20f waliif bahaniiru.
qananiisaan Kipchoogee bara 2008 Beejing irratti akkasuma Shaampiyoonaa Addunyaa irratti meetira 5,000 mo’achuudhaan ol-aantummaa qaba.
Fiigicha daandiirraa 14 irratti waliin dorgoman keessaa Qananiisaan 11 mo’ateera.